श्रीमान प्रहरीको जागिरे डिउटीमा, घरमा २ बर्ष देखि प्रेमी ल्याएर दिक्षाले गर्थिन अनैतिक काम – Enepali News
श्रीमान प्रहरीको जागिरे डिउटीमा, घरमा २ बर्ष देखि प्रेमी ल्याएर दिक्षाले गर्थिन अनैतिक काम
July 18, 2020 365
धरान । श्रीमतीले धोका दिएपछि देहत्याग गरेका भनिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको श्रीमती र उनको प्रेमी विरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला अदालत सुनसरीका न्यायाधीश शंकर राईका अंगरक्षक प्रहरी हवल्दा खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । प्रहरीले खतिवडाको श्रीमती दीक्षा खतिवडा र उनका प्रेमी भनिएका विशाल तामाङ विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको हो ।
परिवारका सदस्यले उनको निधनमा श्रीमतीकै कारण देहत्याग गरेको आरोप लगाएका थिए । प्रहरीले दुवैजनालाई पक्राउ गरि अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानवाट उनीहरु दोषी देखिएपछि मुद्दा दायर गरेको हो ।
हबल्दार खतिवडाले देहत्याग गर्नुको कारण श्रीमती दीक्षा र विशालबीचको अ’वैध स’म्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलासा भएको छ। खतिवडाको श्रीमती दिक्षाको उर्लावारी–९ का विशाल संग दुईवर्षदेखि प्रेम सम्बन्ध रहेको प्रहरी अनुसन्धानवाट खुलेको हो । श्रीमतीको अ’वैध सम्बन्ध थाहा पाएका प्रहरी खतिवडाले त्यसैको पी’डा सहन नसकेर देहत्याग गरेको देखिएको सुनसरीका प्रहरी प्रमुख एसपी कमल थापाले बताएका छन् । उनीहरु बिरुद्ध देहत्याग गर्न बा’ध्य पारिएको सम्बन्धि मु द्दा दर्ता गरेर कारवाही अघि बढाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अभियोगमा पक्राउ परेका उनकी श्रीमती दिक्षा र प्रेमी विशाल तामाङ। तस्बिर : रत्नप्रसाद आचार्य- अन्नपूर्ण
हवल्दार खतिवडाले गत असार १६ गते राति जिल्ला अदालत सुनसरीको छतमा देहत्याग गरेका थिए ।
प्रहरीका अनुसार, ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए । श्रीमती दीक्षा र विशालकै कारण उनी डि प्रेसनमा पुगेका थिए ।’ कल डिटेल अनुसार देहत्याग गरेको समयमा उनले श्रीमतीलाई र विशाललाई फोन गर्दा लामो समय दुबैको मोबाइल व्यस्त भएपछि डि प्रेसन र आवेशमा आएर आफैले देहत्याग गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।देहत्याग दु’रुत्साहन आरोपमा पक्राउ परेका विशाल तामाङ खतिवडाकै छिमेकी हुन् ।
आफैँला’ई गो ली हा न्नु अघि ओम प्रकाशले दीक्षालाई पनि फोन गरेको र विशाललाई पनि फोन गरेर मेरो जिन्दगी ब’र्बाद पारिस श्रीमतीलाई लगर राम्रोसँग पाल भनेका थिए । श्रीमती दिक्षाको तामाङसँग सम्बन्ध रहेको थाहा पाएपछि ओमप्रकाशले बारम्बार सम्झाएको पनि अनुसन्धानमा खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरीसंगको बयानमा पनि दुवै जनाले आफुहरुको प्रेम सम्बन्ध रहेको स्वीकार गरेका छन् । उनीहरुबीच शारिरीक स’म्बन्ध पनि रहेको प्रहरी सामु स्वीकार गरेको प्रहरीले जनाएका छन् ।
सुनसरी जिल्ला अदालतका एक न्यायाधीशको सुरक्षामा खटिएका प्रहरी हवल्दार ओमप्रकाश खतिवडाको देहत्याग घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । उनले यस्तो निर्णय गर्नुका पछाडीको पाटा खुल्दै जान थालेका छन् । मोरङको उर्लाबारी–९ राजघाटका हवल्दार खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । उनका दाई , दिदी लगायत परिवारका सदस्यले घटनाको कारणवारे अचम्म लाग्दो वयान दिएका छन् । श्रीमानले देहत्याग गरेको घटना सुनाउन जाँदा उनको श्रीमतीले अनौठो कुरा भनेकी थिइन् ।
ओम प्रकास र उनकी श्रीमती दिक्षा खतिवडा
ओमप्रकाशका दाजुले भने एक्लै कोठामा बसेकी बुहारीलाई कसरी त्यो कुरा सुनाउने भनेर हामी गएका थियौं, मेरो श्रीमती सहित तिन जना गएर उनलाई तिम्रो श्रीमान बिरामी छन् रे भनेर सुनाउँदा श्रीमतीले उल्टै कहाँ बिरामी हुनु म’रिसक्यो रे त ? भन्दै आश्चर्यजनक जवाफ दिएको उनले बताए । ओमप्रकाशले मलाई अर्कै पुरुषको जिम्मा लगाइदिनु भनेका छन् रे तपाईहरु जिम्मा लगाउन आउनुभएको हो ? भनेर समेत प्रश्न गरेको उनले बताए । बुहारीलाई पी’डा परेको होला भनेर बुझ्न जाँदा उल्टै मलाई अर्कै मान्छेलाई जिम्मा लगाउन आएको हो भनेर प्रश्न गरेपछि अचम्ममा परेको बताए ।
ओम प्रकास दाजु दिदि
ओमप्रकाशको दिदीले पनि श्रीमतीलाई अति माया गरेको भाईले बुहारीवाट घात पाएपछि देहत्याग गरेको बताएकी छन् । एकतर्फी माया गरेको मान्छेले नै घा’त गरेपछि अ’सह्य भएको हुनसक्ने बताइन् । उनले बुहारीकै कारण घटना भएको दावी गरेको बताएका छन् । प्रहरीले बुहारी दीक्षा खतिवडा र उनकी प्रेमी भनिएका विशाल तामाङलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको छ ।
असार १६ गते आफैले बोकेको पे स्तोलले क’न्चटमा प्र हार गरी हवल्दार खतिवडाले देहत्याग गरेका थिए । ‘मृतक खतिवडालाई पहिले देखि नै आफ्नो श्रीमती अरुसँग लागेको शंका गर्दै आएका थिए ।
मृतक ओमप्रकाश र उनका बुवाआमा
जवान छोराको अचानक निधन भएपछि बृद्ध आमावुवा चिन्तित छन् । वृद्ध अवस्थामा जिवनको सहारानै खोसिए पछि बुवा काशीनाथ र आमा निर्मला दुखी भएका छन् । आमाबुवा अलग्गै बस्छन् । केही दिन अघि मात्र ओमप्रकाश वुवाआमालाई भेट्न आएका थिए । बुवा आमाले खाना खाएर जाउ भन्दा पनि मानेनन् । बुहारीसंग राम्रो सम्बन्ध पनि नभएको सुनेका थियौं । हामीसंग नबस्ने भएकाले दिनहुँ भेट पनि हुदैनथ्यो बुवा काशीनाथले भनेका छन् ।
उनले बुहारीले नै घटना गराएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् । घटनास्थलमा पनि शं’कास्पद अवस्था भएको आफुले थाहा पाएको पनि बताएका छन् । आमाले दही केरा खाएर जा भन्दा पनि हतार गरेर ड्युटी गर्न गएको छोरा किन म’र्यो ? बुवा भन्छन्, आफ्नो ज्यानको माया नै मा’रेको थियो भने आमाले दिएको खानेकुरा खान पनि हतार गरेर किन ड्युटीमा जान्थ्यो ? आमा निर्मलाले आफनो छोरा कहिल्यै झ’गडा नगर्ने स्वभावको भएको बताइन् । उनले श्रीमतीसंग नै कुरा नमिलेका कारण मन भरिएर आफैलाई समाप्त पारेको बताइन् । बृद्ध आमा बुवाले बुहारीकै कारण छोराको ज्यान गएका कारण उनलाई सजायको माग गरेका छन् ।
Prevघरायसी समान किन्न भारत जान छोडे नेपाली, भन्छन्, अब त नेपालमै किन्ने हो भारत त खुले पनि गइदैन !
Nextनिश्चललाई राजेश हमालको अभिनय मापन गर्ने अधिकार छैन अ’श्लिलशब्द बिना चलचित्र निर्माण गरेर देखाउ
काठमाडौंको सडक डुब्यो
बाढीपहिरोले सिद्धार्थ र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अवरुद्ध
अरनव गोस्वामीले बोल्नै नदिएपछि लाइभ कार्यक्रममै खाना खाइदिइन् अभिनेत्रीले
घर भित्रै थुनियो पशुपति मन्दिरको ऐतिहासिक शिवलिंग
बल्ल डराए ट्रम्प : इतिहासमै पहिलोपटक अमेरिकाका ५० वटै राज्यमा संकटकाल घोषणा (3539)
ॐ ॐ ॐ….२०७७ सालमा यी राशिहरूको चम्किँदै छ भाग्य, हेर्नुहोस् वार्षिक राशिफल (2132)
सिन्धुली खुर्कोटकी इन्सपेक्टर शान्ता वाइबाको लोभलाग्दो काम ! सयौ मजदुरको उद्दार (1635)